Wararka Maanta: Jimco, Mar 16, 2018-Xildhibaanno dood kulul ka yeeshay mooshinkii laga keenay guddoomiye Jawaari
Kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa hadalo ka jeediyay xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka oo mid walba oo ka mid ah cabiray aragtidiisa Mooshinka, hasse ahaatee mar marka qaar kulanka ayaa isku badalayay sawaxan iyo qeylo iyo xildhibaannada qaarkood faraha isku taag-taagaan.
Xildhibaannada ayaa wali u muuqda kuwa siweyn ugu kala aragti duwan mooshinka oo ah mid xitaa ay ku kala qeybsameen guddoonka sare ee Golaha Shacabka.
Guddiga joogtada ah ee baarlamaanka ayaa sheegay in guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Cabdiwali Sheekh Muudeey oo ay wax ka weydiiyeen in uu faah faahin dheeraad ah ka bixiyeen uu sheegay in kaliya in 91 xildhibaan uu hayo oo ku saxiixan mooshinkan 16 ka kalana ay ka laabteen.
Waxa ay sheegeen in arrintaasi darteed ay u buriyeen Mooshinka, maadaama uusan sharci aheyn, balse waxaa ay tilmaameen in ay qalad aheyd in guddoomiye Muudey uu warbaahinta la hadlo, isaga oo sharci ku tilmaamaya mooshinka.
Sabtida maalinta Beri ah ayaa loo balansan yahay in xildhibaannadu shirkoodii caadiga ahaa ku yeesheen xarunta golaha shacabka, lamana oga sida uu xaalku noqon doono.